Ady amin'ny kolikoly - Ho raikitra ny fitsarana an'ireo mpitondra ambony sy mpandraharaha maromaro - Ao raha 18 janoary 2019 - Survivre à Madagascar dans le milieu des infrastructures télécom et réseaux CISCO
Accueil Corruption Madagascar Ady amin’ny kolikoly – Ho raikitra ny fitsarana an’ireo mpitondra ambony sy...
Ho raikitra ny fitsarana an’ireo mpitondra ambony sympandraharaha maromaro.Atolotra ny Fitsarana ireo voarohirohy. Hisesisesy ny fotoam-pitsarana an’ireo olom-panjalana ambony sy mpandraharaha maromaro voasaringotra amina raharaha kolikoly.Araka ny tatitra nataon’ny tale jeneralin’ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly(Bianco) Jean-Louis Andriamifidy, tetsy Anosy, omaly, dia saika efa vita avokoa nyfanadihadihana momba an’ireo raharaha goavana tonga teto ampelatanan’izy ireo. « Alefa anyany amin’ny Fitsarana manokana misahana ny kolikoly (Pac) amin’izay ireo raharahra ireo »,hoy izy.Efa tamin’ny faraparan’ny taona 2018 no nanatanterahan’ny Bianco ny fanadihadihanasy ny famotorana an’ireo manam-pahefana sy mpandraharaha voasaringotra amina resakakolikoly, saingy noho ny fisian’ny fotoam-pialan-tsasatry ny Fitsarana nanomboka ny 15Desambra 2018 ka hatramin’ny 15 Janoary 2019 lasa teo, dia izao vao atolotra an’ireompitsara eo anivon’ny Pac ireto raharaha goavana maromaro ireto. »Mbola misy ihany koa ireo raharaha hafa tokony hatolotra ny Pac ary efa eo am-pamaranana ny famotorana izahay » hoy hatrany ny tale jeneralin’ny Bianco. Isan’ny raharahrahampiakarin’ny Bianco eo anivon’ity Fitsarana ity ny momba an’ireo mpandraharaha miisaroa, dia i Mbola Rajaonah sy i Claudine Razaimamonjy.Tsy hijerena tavan’olonaNohitsian’ny tale jeneralin’ny Bianco fa tsy hijerena tavan’olona na hampidirana resakapolitika ny fitsarana an’ireo mpan- draharaha miisa roa ireto. «Miezaka manao fanadihadianaamin’ireo tranga rehetra voaray izahay. Tsy hanavahana clona izany ary matetika dia misy nymanafangaro ny politika sy ny lalàna. Na inona na inona no mitranga, na misy aza nyfifandimbiasan-toerana eo amin’ny fitantanana ny firenena dia tohizana foana ny asa tokonyhataon’ny Bianco », araka ny fanazavana noentin’i Jean Louis Andr iamifidy, izay sadynanamarika fa amin’ity faran’ny herinandro ity, na amin’ny fiandohan’ ireo herinandro ambonyio, no hampiakarana ny raharaha mikasika an’ireto mpandraharaha ireo eny amin’ny Pac.Ankoatra an’izany, raharaha dimy goavana izay efa nanaovan’ny Bianco fanadihadianano hiakatra Fitsarana, ato ho ato. Isan’isany ny voa laza fa firaisana tsikombakomba nataonamanampahefana ambony tamin’ny famoahana volam-panjakana tsy ara-dalàna. Eo ihany koany fandoavam-bola indroa miantoana tamina asa iray, ary ny voalaza fa fisiana kolikolynandritra ny fanadinam-panjakana hidirana ao amin’ny sekolim-pirenena fanofanana hompitsara sy mpiraki-draharaha (ENMG).Fantatra fa voaroh irohy ireo mpiasa maromaro eo anivon’ny Tahirim-bolam-panjakana. Eo ihany koa ireo olom-pirenena tsotra sy mpandraharaha hafa voampanga aminaraha- raha kolikoly. Mahatratra hatramin’ny 42 000 tapitrisa ariary ny fitambaran’ny volavoahod inkodina amin’ireto raharaha miisa dimy goavana nanaovan’ ny Bianco fanadihad ianaireto,izay hatolotra ny Pac ihany koa.Juliano Randrianja
Article précédentFiahiahiana kolikoly sy hosoka – Hiakatra fitsarana ny raharaha Mbola Rajaonah – Taratra du 18 janoary 2018
Article suivantBianco – Le dossier Mbola Rajaonah bouclé d’ici quelques jours – Midi madagasikara du 18 janvier 2019